ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ဘယ်လိုကုသမလဲ - Hello Sayarwon
ဝက်ခြံဟာ အဖြစ်အများဆုံးသော အရေပြားရောဂါတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အရေပြားပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အမာရွတ်တွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာပြဿနာမှ မရှိပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ အမာရွတ်တွေကို မျက်နှာမှာ မြင်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုပြောပြပေးမှာကတော့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံပေါက်တဲ့အခါ သင့်အရေပြားဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသွားတာဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမှန်သမျှဟာ အမာရွတ် ကျန်ခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဝက်ခြံကို ဘယ်လိုကုသခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အမာရွတ်ရဲ့ ပုံစံကွာခြားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို အကောင်းဆုံး ကုသနိုင်တဲ့နည်းကတော့ အစကတည်းက ဖြစ်မလာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်လေးတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ အခြားပိုးမွှားတွေရန်က ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဝက်ခြံကို ရေအေးအေးနဲ့ ဆပ်ပြာအပျော့စားကို သုံးပြီး ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ အခြားပိုးမွှားတွေက အနာကျက်တာကို နှေးစေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သန့်စင်တဲ့အခါ hydrogen peroxide၊ အိုင်အိုဒင်း ဒါမှမဟုတ် အယ်လ်ကိုဟော(အရက်ပျံ)တို့ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသာ သုံးစွဲရပါမယ်။ သူတို့တွေဟာ ကြီးမားတဲ့ အနာတွေအတွက် အကျိုးရှိပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သတ်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဝက်ခြံပျောက်ဖို့ နှောင့်နှေးစေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ဝက်ခြံကို အသေအချာ ဖုံးအုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ပတ်ဝန်းကျင်က အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဝက်ခြံထဲ မဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သတ်ပစ်နိုင်ဖို့အတွက် ဝက်ခြံကို ပိုးသတ်ဆေးတွေ လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်းဟာ ကြီးမားတဲ့ဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ဖို့ခဲယဉ်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဝက်ခြံအမြန်ပျောက်ဖို့အတွက် အရေပြားအစိုဓါတ်ကို ထိန်းပေးထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုတဲ့ တံဆိပ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဝက်ခြံကိုအုပ်ထားတဲ့ အကာကို တစ်ရက်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် သုံးလေးနာရီခြားတစ်ခါ လဲပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးမပြုခင် ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ပါ။
ဝက်ခြံကို ညှစ်တာ၊ဆိတ်ဆွတာမျိုးတွေကြောင့် အရုပ်ဆိုးတဲ့ အမာရွတ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်အရေပြားကို ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ပိုမိုထိတွေ့စေနိုင်တာကြောင့် ပိုးဝင်ပြီး အမာရွတ်ဖြစ်လာစေတာပါ။
နေလောင်ရင် ဝက်ခြံနေရာတွေက ပိုမည်းလာနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ဟာ သင့်အရေပြားဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေပြီး အညိုရောင် ဒါမှမဟုတ် အနီရောင်ဝက်ခြံတွေကို ထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေလောင်ခံခရင်မ်တွေ လိမ်းပြီး သင့်အရေပြားကို ကာကွယ်ပါ။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေဟာ ဝက်ခြံပျောက်ပြီးတဲ့အခါ အမာရွတ်တွေ ကျန်ရစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ အရေပြား နီရဲရောင်ရမ်းတာ အစရှိတဲ့ မူမမှန်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့လာရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြသသင့်ပါတယ်။
1. Reducing Scars. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/wound-care-10/reducing-scars?page=1.
2. SCAR MANAGEMENT. http://www.assh.org/handcare/procedures-and-treatment/scarmanagement.
Accessed November 12, 6.201
3. Proper wound care: How to minimizeascar. https://www.aad.org/public/skin-hair-nails/injured-skin/wound-care. Accessed November 12, 2016.